फ्राईडे रिलिज : पर्दामा छुट्टा छुट्टै जनराको तीन फिल्म, दर्शकको रोजाई कुन ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फ्राईडे रिलिज : पर्दामा छुट्टा छुट्टै जनराको तीन फिल्म, दर्शकको रोजाई कुन ?
फिल्मी फण्डा । आज शुक्रबारबाट हलहरुमा तीन फिल्म एकसाथ प्रर्दशनमा आएको छ । हलहरुमा आजबाट ‘कहीँ कतै’, टिनएज र पिरिम पर्या छन् एक साथ प्रर्दशनमा आएको हो । यी तीन वटै फिल्म छुट्टा छुट्टै जनराको फिल्म हो ।
फिल्म कहीँ कतैमा नव कलाकार शिवानी गिरी र सोनाम भरपुङ्पाको साथमा सरोज खनाल, दीलिप रायमाझी, किशोर खतिवडा लगायतका कलकारको अभिनय रहेको छ । उमा फिल्म्स्को ब्यानरमा तयार भएको फिल्मको निर्माता उमा बेबी हुन् भने फिल्ममा शबिर श्रेष्ठको निर्देशन र रोशन श्रेष्ठको एक्शन रहेको छ ।
यस्तै कमेडी जनरामा निर्माण भएको फिल्म पिरिम पर्या छन् मा निर्देशक पुरनको लेखन, बिमल ढकालको छायांकन, बाबु बलामीको द्धन्द्ध र बिकास चौधरी र बिनोद भुजेलको संगीत रहेको छ । फिल्ममा दीलिप रायमाझी, जयकिसन बस्नेत, सुवास मेचे,रमेश बुढाथोकी, शुभेच्छा थापा, राजाराम पौडेल, उमा कार्की, सोभित बस्नेत, लय संग्रौला,चाँदनी कोइराला लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । माता बसुन्धरा मुभीज र बन्धु फिल्मस्को संयुक्त प्रस्तुतिमा निर्माण भएको उक्त फिल्मलाई सुनील मानन्धर र रोहित–रत्नले बितरण गर्दैछन् ।
यस्तै युवा पुस्ताको बास्तबिक कथा समेटिएर निर्माण गरिएको फिल्म टिनएजमा नरेश बिर सिं , एन्जीला खड्गी , प्रतिक्षा खड्का , सरोज शाह , कृष्ण सिवाकोटी , सरिता राजउप्रेती , निर्मल स्याङतान लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । फिल्मलाई बिरु मगर , बुद्धिमान स्याङतान , चिनिमाया पाख्रिन र देबिका खड्गीले सयुक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । हेलेन पाख्रिन फिल्मस्को व्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा दिनेश पाख्रिनको निर्देशन रहेको छ ।